Liiska xulashada ee AutoCAD 2010 - Geofumadas
In kasta oo AutoCAD 2009 ay hadda ka hadhsiisay, iyo badh adduunka ayaa raadinaya qaabka «ka iibso internetka»:), liistada rajada nooca 2010 waa mid xiiso leh:
Fadlan qor liiska ma aysan la kulmin AutoCAD 2009:
U diyaari PDF si DWG, Iyada oo awoodaha ay PDFs leeyihiin hadda, waxay noqon lahayd wanaagsan in ay awoodaan in ay soo saaraan macluumaadka iyada oo aan ku qasban tahay in la sameeyo Adobe Illustrator
Qalabaynta xulashada daahfurnaan ku ah hargab adag, si ay u mideysan yihiin midabada buuxsan ee loo arki karo marka la daabaco.
Diido qiyaasta muuqaalka halka ay tahay paneando
Kala doorasho dhammaan hachurados ee asalka ah, waxay dhacdaa in dhammaan hachos ay ka xanaaqaan xagga hore waana marwalba lagama maarmaanka u ah inay u dirto hoosta ... haddii ay jiri lahayd badhan taas, waxaan ku badbaadineyno waqti badan
Isbarbardhigga u dhaxeeya laba sawir, kaas oo loo yiqi karo sawir oo la barbardhigo kuwa kale oo muujinaya isbeddelka midab kale iyo tirakoobyada kala duwanaanta u dhexeeya walxaha, heerarka, blocks ... ama wax kale oo loogu talogalay .... naga caawi in aan fahanno hal nooc oo kale. (Dabcan haddii aad ku dari karto taariikhda taariikhiga ah way fiicnaan lahayd)
Doorashada tamarta geli qoraalka cutubka ku jira cabbirka, wax sida mtext ah
Si aad u xakameyso muujiyaan amarka mid ama dhowr shey, inkastoo ay sameyn karaan sida Corel Draw, oo leh ctrl + bogga ama shift + pgup waxaad ku xakameyn kartaa amarka alaabta
Si aad u badasho a si caadi ah loo xakameeyo iyada oo aan lahayn meelo badan, ama xayndaab ama xulasho, laakiin taasi ma aha sidii laamijka hadda.
Awood u yeelo inaad wacdo sawirada raajada tixraacay sidii inay yihiin tixraacyo dibadeed ... waxa ay cheles ku magacaabaan "dul-saar"
Waad daabici kartaa qaabab badan isla markiiba, tusaale ahaan feylka daabacaadda (plt), pdf iyo degganaan hal safar. Ma aha run in hindise-yada ay inta badan yiraahdaan: faylasha waxay yimaadaan dwf, pdf iyo dwg ... oo sameeya midkaas waa inuu iska dhinto.
Liisku waa dheer yahay, laakiin kuwan waa kuwan waa ra'yiga ugu badan ee loo codeeyay.
Waxaan dooran lahaa:
Taasna waa la deyn karaa layers oo leh hal guji iyo iyada oo aan tagin kooxdaas ... mar kasta ama ku dhufo jiid jiid ah.
Taas waxaa la yiraahdaa sawirro raajooyin ah oo aan la isticmaalin xasuusta habka is-dilka ah ... hubaal waa inay jirtaa hab lagu sameeyo.
Iyagu ha soo qaadaan amarka deedka in ay ka tagay waqti hore, sida in la xushmeeyo xulashada digaagga
Taasi waa Amarka Ingiriisiga ka shaqeeya qaababka Isbaanishka ... waa wax laga yaabo inay lumiso si sharci ah loo iibsaday, oo khalad ah loo doortay qaabka Hispanic.
Taasi waa la qori karaa jihooyinka iyo masaafada ee tiir, halkii ay ahaan lahayd old-fashioned isagoo yiri @44.45 <36D ...
Taasi amarkii ugu dambeeyey Had iyo jeer ha noqdaan kuwo firfircoon, haddii aan mid kale la doorto, tusaale ahaan, haddii aan sameeyo goobo leh raadiyaha 20, amar isku mid ah ayaa la ilaaliyaa iyada oo aan dib-u-wareegin, galin, galin, galin ... ama haddii aan sameeyo xNUMX, kala doorashada badan leh width isku mid ah waxaa la sii hayo ilaa aad doorato amarka kale. Waa maxay sababta aan weydiin this? maxaa yeelay abuuray ee PC ah ayaa ka fiirsaneysa inay baabi'inta muhiimka ah ESC iyo waxaa sida aynu fucked qof kasta.
Jolin iyo amarkaas «liiska»Ku muuji macluumaadka miiska hana ku tusin chorizo ​​aan faaiido badnayn.
Miyaad u maleysaa qof kale? Wadar ahaan, version 2010 waa inuu keenaa waxyaabo cusub, maadaama uu jiro hadal uu leeyahay qoraalada Labada lamaane ee AutoCAD waa dib-u-habeyn, kuwa qashinka ah waa uun qurxiyo.
Waxaa xiiso leh in ka dib Maxaa Cusub ee AutoCAD 2012, waxaa weli jira arrimaha miiska.
Post Previous«Previous Maxaa Geofumaados wax cuno
Post Next Falanqaynta isbarbardhiga ee GIS SoftwareNext »
18 Jawaab: "Liiska xulashada ee AutoCAD 2010"
hello sidee ayaad fadlan iga caawin kartaa haddii aan uga mahadcelin lahaa sidii hore ee autocad waan dooran jiray ka dibna waxaan ku soo galay amarka oo gali oo fuliyaa laakiin hadda pc-ga ayaa dib loo bilaabay waana inaan marka hore soo galaa amarka kadib markii aan soo xusho oo aan galo waana shaqeeyaa waxaanan u malaynayaa anigu garan maayo fikradeyda waxay ka sii dhib badan tahay sidii aan hore ugu ahaa waad ku mahadsan tahay caawimadaada
naguib isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan rabaa in aan ku daro aagagga isweydaarsi kasta oo aan doorto iyo marka aan dhammeysto doorashada, marka la galo, waxaan tuurayaa natiijada. runta ayaa iigu roon in aan ogaado. websfunk@hotmail.com
karen isagu wuxuu leeyahay:
Haddii aadan garanaynin meesha aad u rabto 2010 this
ku dar codsiga
Halkan waxaad noqon doontaa rajooyinkaaga ama ballanqaadyadaada waxaan rajeynayaa inaad jeceshahay farxad
Isabella isagu wuxuu leeyahay:
Codsiyada: pg * maya, waxaan rabay inaan sheego * pgp (aad taqaan, amarrada otocad caadada ah) Hase yeeshee, waxa igu dhici lahaa aniga oo aan amar la'aan aheyn!
Waa hagaag, ma jeclin version 2010. daadsanaanta A of baararka k qalab qarsoon yihiin oo furan iyo idinka iilo ama mana aad heli kartaa ... waxaan haysta inuu la qabsado version k this ma ahan oo keliya arki waxa cusub, k wareer mooyee tngo arki badhamada view cusub ka hal igu adag tahay in la ogaado . Ilaah baan ku mahadnaqayaa sida aan u habeyno pg !!!
By habka, on my pc waxaan mar walba leeyihiin version 2006, waayo, aniga ma jiro nooc ka wanaagsan.
Midig taabashada shaashadda, xulo "xulasho". Kadib waxaad dooranaysaa "bandhigay" tab ka dibna "walxaha daaqada", halkaas waxaad ku dooran kartaa midabka aad rabto asalka.
Emmanuel isagu wuxuu leeyahay:
wuu ka xumahay cid garanaya sida loo baddalo midabka asalka ah ee caddaanka ah ee madow maxaa yeelay ma heli karo ikhtiyaar?
Waa wax laga xumaado ah in software this si waxtar leh in la sii wado la xariirta sanad kasta, laakiin aan weli lagugu leeyahay aad u badan, xitaa waxaan ka dhigi kartaa sawiro of tayo wanaagsan leh version 2000 oo haddii galisay uu version 14, Waxaan leeyahay on my computer version 2004 aan calaamadaha waxaan siiyey faraqa ugu version 2009 casriga ah? 2010? q Waxaan qabaa kaliya waxaa wax ganacsi ah runtii wax horumar, AutoCAD waa sawir farsamada software ah oo ay tahay in la hagaajiyo oo kaliya in, farsamo ay barbaro galeen.
AUTO CAD waxay ka buuxsantahay qalab iyo amarro badan oo isticmaalayaasha aan garanayn sababtoo ah maaha kuwo wax ku ool ah in ay wax badan bartaan si ay u sameeyaan sawirro.
Marka la soo koobo, rabitaanadayda:
hab sax ah oo kuu sheegaya sida saxda ah ee loo yaqaan 'polyline' furan yahay in la xiro
habka loo kala qaybiyo geesoolaha agagaarka
habka sahlan ee lagu dhisayo miisaanka shaqada, cabbirka waraaqaha iyo cabbirrada laga bilaabo bilowga
qaabka qaababka lakabka sida sawir-qaadista
2010 ?? Waxaan doonayaa in autocad-yada aan fahmo amarrada la iiga dhigay si aan u aragno inay run tahay inaan ku jirno 2010 !!!!!!!!!!!!!!!
Ku saabsan arrinta of dillaacaan, inkastoo ay suurto gal ah in this jar ma aha, version 2010 AutoCAD ayaa dhafan doorasho ee kordhin ah goo aan israacinayo inay line gaar ah, in badan furfuraya weydiintaada.
Waxyaabaha lagu hagaajinayo bandhigida buug-yaraha la heli karo ... waa fekrad fiican, rajo iyo socod
Oliver Yañac (Peru) isagu wuxuu leeyahay:
1.- Taasi dillaacaan waa laga gooyn karaa xad go'an, dhowr jeer baan realziado mid texturaciones at xad go'an iyo sababo kala duwan ayaa si ay u dhinto kuwa xad waxaa fiicnaan lahayd haddii autocad cusub u ogolaan hacth jaray amarka TRIN ah , oo ma u leeyihiin in ay soo noqdaan waxay leedahay xad texturing mar walba oo aad guurto.
Taasi dillaacaan custon 2.- lagu soo bandhigi karaa sida autocad default ah, sida caadiga ah marka aad cabbayso hacth cusub ee custon palette xaqa ah liis dheer noqon lahaa wanaagsan in la visualized laga yaabaa in koox ahaan hacth default waxaa loo soo bandhigay. (OASE figuritas).
ku dhicin isagu wuxuu leeyahay:
ku darso doorsoomaha "vba programming for autocad" oo wax ka qabta dhammaan astaamaha sheyga bulgega ah ee polyline
Carlos Castillo (RD) isagu wuxuu leeyahay:
Qaar ka mid ah waxyaabaha soo ifbaxay waa suurtagal.
Laakiin waxaa jira qaar aan jeclaan lahaa inaan ku daro
cabbir baadi -Correct, waxaan ula jeedaa marka dimensionas ka dibna u guurto shayga, in kiisas badan oo aragti fog guuro gaar ahaan marka aad copyclick file a in inad si
Hufnaanjinta baaluq ayaa suurtogal ah, laakiin kaliya marka la eego ra'yi-gelinta (gelinta ikhtiyaarka baaritaanka midabka miiska daabacada), waa in la arkaa marka la shaqeynayo ...
comango Gruop ayaa, waa in la soo hagaagtay, waa in aad isticmaasho nidaamka max 3ds u ogolaanaya group iyo Bilaa-deg deg ah oo aan haysan in ay qaataan shaqo aad u badan in ay miiska fucking ayaa autocad.
Amarka wareega, waa inuu abuuraa nuqullo aan xadidnayn marka la isticmaalayo kumbuyuutarka kumbuyuutarka, halkii laga rabay mid uun, sida hadda, waa wax aad u dhib badan ....
Waa in ka mid ah qaybinta radial ukunteeda ah (barnaamij kasta oo iyaga ayaa waxaan ogahay) waa ay adag tahay inaan ka dhaansado perpenticulares cufan ee panderetes marka ay geesba, si toos ah waa kuwo wanaagsan laakiin haddii alquien ayaa u soo jiidi u ogaado sida ay u adag tahay, gaar ahaan, laakiin ogow xeerka macnaha ... jeje
- Waxaan haystaa dad kale laakiin waqtigaan waa kuwa wanaagsan -
konkan isagu wuxuu leeyahay:
Waan ogahay in laga bilaabo 2006 wixii ka dambeeya inaad xannibi karto daaqadaha si aad u sameysid "rooti".
waxaa la xushay-> iyo sanduuqa guryaha -> Dispaly Quful: haa !, maxaa yeelay waxay ku timid caadi ahaan "maya"… 😛
lakabka ... menu Express ... ama habka caadiga ah ee fudud.
iyo mid ka mid ah kuwa khaarijka ah ... waxaa jira sifaha ama amarka Quick Quick ... amarrada oo dhan waa la doortaa ... waana taas
Way ila dhadhan horumarka tegayo shuruudaha nidaamka dhinaca ... gaar ahaan autodesk autocad Linux ah iibiyaa gurmad ... in! waxay noqon laheyd mid cajiib ah
roko isagu wuxuu leeyahay:
"Autocad 2010" waa inay ku dardaa daruuraha iyo cirka leh nabaad-guurka midabada, u beddelaan boosaska daruuraha iyo si daruuraha ay u helaan midabka jannada ka tarjumaya si macquul ah oo macquul ah: 2009 kaliya waxay leedahay cirka ama qorraxda laakiin taasi kuma filna, iyo nabaad-gurto midabbadu qorrax ma leh
Maqnaanshaha miisaanka ee daaqada garaafka ah ma tixraacin waxa aan fahmay ...
Waxay ku weydiinayaan inaad isticmaali karto amarka PAN iyo in miisaanka daaqadan sawiradu uu joogto yahay oo uusan isbeddelin.
Waa hagaag, taas oo aan la sameyn karin qaybaha hadda jira ... laakiin ma arko adeegga.
Marka loo eego "gaagaaban", iyagu waa uun taas, furayaasha ama habeynta amarrada, marka waa inaad soo gasho acad.pgp oo aad habayn kartaa ... 🙄
Waad ku mahadsantihiin caddaynta ku saabsan qoraallada loogu talagalay amarrada Ingiriisiga ee qoraalada Spanishka.
Inkasta oo gaabnaanta (L) ee xariiqda, (tr) loogu talagalay trim aan shaqeynin haddii ay had iyo jeer ka shaqeeyaan qaababka Spanish =
Anigu waxaan eegayaa qalabka cad, si aan u eego haddii ay taasi tahay waxa aan ula jeedo.
«Ku xaddir qiyaasta muuqaalka aragtida ...», tarjumaadda Hispanic waxaa laga yaabaa inaysan lahayn ruuxii asalka ahaa. Kani waa nooca Ingiriisiga, si aad u aragto inaad naga caawiso fahanka waxa rabitaankani yahay.
Soo koobid: Awoodda lagu xirayo qiyaasta aragtida, iyada oo weli u oggolaanaysa awoodda inay ku daboosho aragtida
Sharaxaad: Way fiicnaan lahayd haddii aad xakameyn kartid miisaanka (zoom factor) ee aragtida, laakiin waxay weli u oggolaanaysaa in ay ka dhex muuqdaan muuqaalka.
Sidee Loo Isticmaalay: Waxaa jira waqtiyo marka miisaanka (zoom) uu noqon karo mid sax ah aragtida, laakiin waxaan ubaahanahay awood
«Slide» (pan) aragtida gudaheeda gudaha aragtida.
Qalabka Astniyaadka: Qalabka sawirada 2D
- Ku xir qiyaasaha aragtida inta ay argagaxeyso »
Tani waa suurtogal in la sameeyo (waxaan ka hadalnaa booska warqadda, sax?)
- «In amarada Ingiriisiga ay ka shaqeeyaan noocyada Isbaanishka ... waa wax laga xumaado in lagu lumiyo si sharci ah oo loo iibsaday, oo si qalad ah loo doortay howlgalka Hisbaaniga.
Nooc kasta oo ah 'AutoCAD', haddii aad ku qorto amarka Ingiriisiga ee hore ee jarka hoos ku qoran "_" way fiicantahay
- «Inaad dami karto oo aad dul dhigto adoo hal dhagsii oo aadan u tegin gudigaas waqti go'an ... ama aad ku dhex jirtid jiid fudud.
Miyaad eegtay amarrada EXPRESS?